GNH - Kudhinda nemaoko） Crane Scale
Iyo yakakwira tembiricha inodzivirira yemagetsi crane sikero ine yakakwana komputa kutaurirana interface uye hombe skrini kuburitsa interface iyo inogona kuve yakabatana kune komputa.
Iyo yekunze nzvimbo yeiyi yepamusoro tembiricha inodzivirira yemagetsi crane sikero yakazara nickel-yakafukidzwa, anti-ngura uye anti-ngura, uye isina moto uye yekuputika-chiratidzo mhando dziripo.
Iyo yakakwira tembiricha inodzivirira yemagetsi crane sikero yakagadzirirwa nefoni ina-vhiri rinobata trolley kuti iwedzere sevhisi renji yeiyo yepamusoro tembiricha inodzivirira crane sikero.
Kuwedzeredza, kudzikisira chiyeuchidzo kuratidza, yakaderera magetsi alarm, alarm kana iyo bhatiri inokwana iri pasi pe10%.
Iyo yepamusoro tembiricha inodzivirira yemagetsi crane sikero ine otomatiki yekudzima basa kudzivirira bhatiri kukuvara kunokonzerwa nekukanganwa kuvhara
GNP - DZIDZA DZIDZO） Crane Scale
Nyowani: Dhizaini nyowani dhizaini, yakareba yakamira nguva uye yakasimba
Kurumidza: yepamusoro-yakasanganiswa sensor dhizaini, inokurumidza, yakarurama uye yakagadzikana kuyera
Zvakanaka: Yakakwira-mhando yakasimbiswa zvizere, isina-bhatiri rechargeable bhatiri, yakakwira-simba rova ​​isingagadzike aluminium alloy kesi
Yakagadzika: chirongwa chakakwana, hapana tsaona, hapana hops
Runako: Chitarisiko chemafashoni, dhizaini
Dunhu: Ruoko rwekuchengetedza ruoko, inyore uye ine simba
Kuita kukuru uye zviratidzo zvehunyanzvi:
Ratidza maratidziro Ultra-yakakwira kupenya LED 5-chigaro chakakwirira 30mm kuratidza
Kuverenga kudzikamisa nguva 3-7S
GNSD - Handheld - Huru Screen - Crane Scale
Wireless yemagetsi crane scale, yakanaka goko, yakasimba, anti-vibration uye kuvhunduka kuramba, yakanaka isina mvura kuita. Yakanaka inopesana nemagetsi-magetsi kupindira kuita, inogona kushandiswa zvakananga pane yemagetsi chuck. Inogona kushandiswa zvakanyanya muzvitima zviteshi, simbi uye simbi simbi, migodhi yesimba, mafekitori uye emabhizinesi emakambani.
JJ Isina Mwero Yekuyera Chidimbu
Yaro permeability level inogona kusvika IP68 uye iko kunyatso kuri chaizvo. Iyo ine akawanda mashandiro senge yakatarwa kukosha alarm, kuverenga, uye kuwandisa kudzivirirwa.Iplate yakavharirwa mubhokisi, saka haina mvura uye nyore kuchengetedza. Iko rinotakura sero rinewo mvura uye rine dziviriro yakavimbika kubva pamushini.
Yaro permeability level inogona kusvika IP68 uye iko kunyatso kuri chaizvo. Iyo ine akawanda mabasa senge yakatarwa kukosha alarm, kuverenga, uye kuwandisa kudzivirirwa. Zviri nyore kuisa uye nyore kushandisa. Ose mapuratifomu uye chinongedzo hachina mvura. Ose ari maviri akagadzirwa nesimbi isina chinhu.
Yaro permeability level inogona kusvika IP68 uye iko kunyatso kuri chaizvo. Iyo ine akawanda mabasa senge yakatarwa kukosha alarm, kuverenga, uye kuwandisa kudzivirirwa.
Kuyera chiratidzo chebhenji chikero
48mm yakakura Subtitle girini digital kuratidza
8000ma lithiamu bhatiri, inopfuura mwedzi miviri yekuchaja
1mm gobvu simbi isina dzimba
Stainless simbi T-yakaumbwa chigaro inoda kuwedzera mutengo unosvika madhora maviri
Isimbi isina waya yekuyera chiratidzo cheplatform scale
Yakazara mhangura waya shanduko, kushandiswa kweviri kuchaja uye plugging
6V4AH bhatiri ine chokwadi chakavimbiswa
360-degree inotenderera inobatanidza ine inochinjika yekuona angle
Isimbi isina tsvina T-chigaro chinoda kuwedzera mutengo
Kuputika-chiratidzo Isimbi isina simbi Yekuyera chiratidzo
304 simbi isina dzimba dzimba isina mvura yerabha mhete.
Inesarudzo 232 inowirirana
4000ma lithiamu bhatiri, 1-2 mwedzi yemubhadharo mumwe;
Iine chitupa chekuputika-chiratidzo, iine 3.7V simba rekuchengetedza patent
Nyowani- ABS Kuyera chiratidzo cheplatform chikero
Yakakura skrini ye LED inorema basa
Kuyera uye kuona kunogona kugadziriswa, iine yakazara mabasa
ABS Kuverenga chiratidzo cheplatform chikamu
OCS-GS, Yakabata Ruoko, Crane Scale
1、Yakakwira-chaiyo yakanyatsobatanidzwa mutoro sero
2、A / D kutendeuka: 24-bit Sigma-Delta analog-to-digital kutendeuka
3、Kwakakurudzira chirauro mhete, kwete nyore kuti ngura uye ngura
4、Hook snap chitubu dhizaini yekudzivirira zvinhu zvinorema kuti zvisadonhe
Calibration Zviyero zveDhijitari Scales, Scale Kuchengetedza Kurema, Certified Weights, Kuyera Kurema Set, Sheuri Beam Load Cell, Kuchengeta Misa,